S Khabar, Author at S Khabar
हिन्दु धर्मवालम्बीहरुका लागि शिवलिंगको विशेष महत्व छ । शिवलिंग भनेको भगवान शंकरको प्रतिक मानिन्छ । धर्मसास्त्रका अनुसार लिंग भनेको शक्ति हो । त्यसलैले उत्पादक शक्तिको चिन्हको रुपमा लिंगको पूजा गर्ने गरिन्छ । लिंगको पूजा गर्नाले सबैको…
दैनिक जीवनमा आजकल सवारी साधनको निकै महत्व हुने गर्दछ । सवारी साधन बिना कामकाजी ब्यक्तिलाई निकै कठिनाई हुने गर्दछ । सवारी साधनको सुख शुद्ध रूपमा शनि र शुक्रमा निर्भर हुन्छ । शनिको कृपा नभएका राशिका ब्यक्तिले सवारी खरिद गरेमा यसले अनावश्यक…
पत्नी पीडित अनौठो पुरुष आश्रम जहाँ दैनिक गरिन्छ कौवाको पूजा !
लोग्नेको हिंसाबाट पीडित महिलाहरुका बारेमा विभिन्न घटना सार्वजनिक हुने गरेका भएपनि पत्नीबाट पीडित भएका पुरुषहरु पनि कम छैनन् । कोही मानिसहरु लोकलाजका डरले आफूमाथि पत्नीले गरिरहेको हिंसा लुकाउन बाध्य भएको पाइन्छ । पत्नी पीडितहरुका यस्तै…
जाडोको समयमा गुन्द्रुकको तरकारी खादा चमत्कारिक फाईदा
गुन्द्रुक स्वादका लागि मात्र नभए स्वा’थका लागि पनि उतिकै फाइदा ज’नक मानिन्छ । यो प्रायको भान्सामा नि’यमित पाक्ने तरकारी पनि हो । गुन्द्रुक स्वादमा निकै चो’पिलो हुन्छ । विश्वमा नेपालको चिनारी दिने परिकार हो, गुन्द्रुक । यसाको से’वन प्राय…
पौष २५ गते शुक्रबार देखि श्रीस्वस्थानी ब्रत आरम्भ: यस्ता छन् धार्मिक मान्यता र नियम
धार्मिक तपोभूमि नेपालमा हिन्दु महिलाले मनाउने एक महिने ब्रत श्री स्वस्थानी शुक्रबारबाट आरम्भ हुँदैछ ।आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वासका साथ नेपाली हिन्दू महिला दिदीबहिनीले एक महिनासम्म श्रीस्वस्थानीको ब्रत बस्ने गर्दछन् ।यो वर्त…
आध्यात्मवादीका अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानको औषधि बोतलमा भन्दा मनमा हुने गहिरो चिन्तनका भित्र हुन्छ । आजभोलिको व्यस्त जीवनशैलीमा मानिसहरु अनिन्द्राको पीडा रहेका हुन्छन् । राम्रो निन्द्राका साथ शुभ फलका लागि धार्मिक रुपमा केही…
वास्तुशास्त्र– पति पत्नीबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन राख्नुहोस् कोठामा यी चिज
पति पत्नीबीचको सम्बन्धमा प्यार तथा विश्वास निकै जरुरी हुन्छ । माया प्रेमको सहारा जिन्दगीको कठिन परिस्थितिको सामना गर्न सकिन्छ । धार्मिक मान्यता अनुसार सम्बन्धको उतारचढावमा वास्तुको विषेश अर्थ र महत्व रहेको छ । पति पत्नीबीचको तनावका केही…
ब्रह्मा र विष्णुबीच झगडा पर्दा जन्मिए भगवान शिव !
भगवान शिव हिन्दू धर्मका प्रमुख देवताहरू मध्ये एक हुन् । भगवानको तीन रूपहरू मध्येका एक शिवलाई विनाशकर्ताका रूपले चिनिन्छ। हिन्दू धर्मका विभिन्न सम्प्रदायहरू मध्ये शैव सम्प्रदायका अनुयायीहरू शिवलाई आफ्नो प्रमुख देवता मान्छन् र त्यसै अनुसार…
बर्सेनि २५ हजार मानिसले लिन्छन्, मर्नुअघि मृत्युको अनुभव
एजेन्सी- धेरै मानिस जीवन जिउन अनेकौं संर्घष गर्दछन् । सकेसम्म आफूलाई जीवित राख्न कैयौं कष्टहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी लामो समय बाच्ने हरेक मानिसको चाहना हुन्छ । केही अपवादबाहेक हरेक मानिस मर्न चाहँदैनन् । त्यसैले बाच्नका लागि…